Kulamadii u socday Puntland iyo xubno ka socday Beesha Caalamka oo natiijo la’aan ku dhamaaday | shumis.net
Home » galmada » Kulamadii u socday Puntland iyo xubno ka socday Beesha Caalamka oo natiijo la’aan ku dhamaaday
Kulamadii u socday Puntland iyo xubno ka socday Beesha Caalamka oo natiijo la’aan ku dhamaaday
Iyadoo labadii maalmood ee u dambeeyay magaalada Garowe kulamo uga socday Puntland iyo xubno ka socday Beesha Caalamka oo uu hogaaminayay Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating ayaa waxaa soo baxaya in kulamadaas aan wax natiijo ah laga gaarin.
Kulamadan oo ahaa kuwo xiriir ahaa ayaa xubnaha Beesha Caalamka waxay la yeelanayeen Madaxda Puntland, Wasiirada, Xildhibaanada odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana ay dhageysanyeen talooyinka iyo aragtida xubnahan.
Xubnaha Beesha Caalamka ayaa ka dhaadhicinayay Puntland sidii ay u aqbali lahaayeen go’aankii ka soo baxay Shirkii Madasha wada tashiga qaran ee lagu doortay nooca doorasho ee dalka ka dhacaya sanadkan 2016.
Ergeyga Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating, ayaa sheegay in waxyaabihii ay kala kulmeen bulshada Puntland iyo Mas’uuliyiinta ay la tagayaan Muqdisho, isla markaana uu jiri doono kulan kale oo la isku imaan doono.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas ayaa sheegay in wali aan la is afgaran, isagoo xusay in wali Puntlan ku adkeysaneyso mowqifkeeda ku aadan doorashada sanadkan 2016 dhaceysa aan lagu saleyn hab qabiil.
Ugu dambeyn Wafdigii ka socday Beesha Caalamka ayaa saaka ka soo dhoofay magaalada Garowe, waxaana lagu wadaa in dowladda Federaalka ay u bandhigaan wixii ay kala kulmeen Puntland, iyadoo lagu wado in maalmaha soo socda in wafdi ka socda dowladda Federaalka ay wada xaajood rasmi ah la galaan Puntland, waxaana goob joog ka noqon doona Beesha Caalamka.
Title: Kulamadii u socday Puntland iyo xubno ka socday Beesha Caalamka oo natiijo la’aan ku dhamaaday
Posted by galmada Net, Published at February 13, 2016 and have 0 comments